လိုခငျြတာတော့ ရပါရဲ့ လိုအပျတာတှေ အားလုံး ပေးဆပျပွီးမှ ရလာတဲ့ လိုခငျြတာလေးက ဘဝမှာ ဘာမှ သုံးစားလို့ မရတတျဘူးလေ ။ - Tameelay
ဘဝမှာ ကိုယျ့အတှကျ ဘယျအရာက အရေးကွီးဆုံးလဲဆိုတာ ကိုယျကိုယျတိုငျ စဉျးစားပါ ပွီးတော့ ဆုံးဖွတျပါ ။
တဈခါတဈရံ ဘဝက လှညျ့စားတတျတယျ ကိုယျအလိုအပျဆုံးသော အရာတှကေို အနားနားရှိနခြေိနျမှာ သတိမထားမိပါပဲနဲ့ ဆုံးရှုံးပွီးသှားကာမှ နောငျတတှနေဲ့ ဆကျပွီး နာကငျြနရေတာမြိုးလေ ။
လူတှဆေိုတာလဲ ခကျတယျ ကိုယျ့ကို ခဈြလှပါခညျြရဲ့ဆိုတဲ့ လူတှကေို ဂရုမစိုကျပါပဲ ကိုယျမရှိလဲ ဖွဈတဲ့လူတှအေပျေါ စတေနာတှေ ဗလဗှနဲ့ အခဈြတှေ ပုံပေးတတျကွတာမြိုးလေ ။
နောကျဆုံး တနျဖိုးမဲ့သှားခွငျးတှေ အပွငျ ကိုယျ့ရဲ့ တနျဖိုးအရှိဆုံး အရာတှကေို ဘယျတော့မှ ပွနျမရနိုငျတော့တဲ့အထိ ဆုံးရှုံးသှားရတတျတယျ ။
ခဈြတဲ့စိတျတဈခုတညျးနဲ့ အရာရာကို ပွညျဖုံးကားခလြိုကျနိုငျတယျဆိုပမေယျ့ အဲ့ဒီခဈြတဲ့ စိတျကွောငျ့ အရာရာကို မမွငျနိုငျတော့တဲ့အထိ မကနျးသှားသငျ့ဘူး ။
ဘဝမှာ လိုခငျြတာတှေ ရှိသလို လိုအပျပါတယျဆိုတဲ့ အရာတှလေဲ အမြားကွီးရှိတယျ ။
ကိုယျလိုခငျြတဲ့အရာတှကေ ကိုယျနဲ့ မထိုကျတနျတဲ့အခါ အခြိနျမနှောငျးခငျ လှတျခတြတျဖို့လဲ လိုသေးတယျ ။
ကိုယျ့ကို တနျဖိုးမထားတဲ့အရပျမှာ တနျဖိုးမရှိသလို ပုံစံမြိုးနဲ့ အခြိနျအကွာကွီးရပျနဖေို့ မသငျ့ဘူး အခြိနျကွာလာတာနဲ့အမြှ ကိုယျ့တနျဖိုးတှေ ပိုပွီး ကလြာမှာပဲရှိတာပါ ဘာမှ ထူးလာမှာ မဟုတျဘူး ။
ကိုယျ့ကို လိုလိုခငျြခငျြနဲ့ ကမျးလာတဲ့ လကျတှကေိုပဲ ဆုပျကိုငျပါ ဘ၀ တိုတိုလေးဆိုပမေယျ့ တကယျတမျးလြှောကျရတဲ့အခါ ထငျသလောကျ မလှယျကူမှနျး နားလညျသဘောပေါကျလာလိမျ့မယျ ကိုယျခဈြကို ရှာပွီး ဘဝမှာလဲ ပငျပနျးရ ခဈြနရေတာလဲ ပငျပနျးရရငျ အဲ့ဒီဘဝဟာ ပိုပွီး မလှယျကူတတျဘူး ။
တဈဖကျသတျ . . . အတှေးတှနေဲ့ အရမျးကွီး ခေါငျးမမာနဲ့ လိုခငျြတာကို ရအောငျယူတတျတဲ့ အကငျြ့က နရောတကာတိုငျးမှာ ကောငျးတာမြိုးမဟုတျဘူး ။
အစကတညျးက လိုခငျြနတောလား လိုအပျနတောလား သခြောစဉျးစားပါ ပွီးရငျ ဆုံးဖွတျပါတယျ
ကိုယျတကယျလိုအပျနပေါတယျဆိုတဲ့ အရာတှေ အနားမှာရှိနတေုနျးမှာ တနျဖိုးထားပါ အဝေးကွီးရောကျမသှားခငျ သခြော ဖမျးဆုပျထားပါ နောငျတ ဆိုတာ . . . ဘာကိုမှ ပွနျပွီးလုပျလို့မရတော့တဲ့ နရေ့ကျတှမှောမှ နောကျကပြွီးရောကျလာတတျလာမြိုးလေ ။ လိုခငျြတာတှတေော့ ရပါရဲ့ လိုအပျတဲ့အရာတှကေို ပွနျတမျးတပွီး နောငျတတှေ ရ နာနာကငျြကငျြနဲ့ ဖွတျသနျးနရေတာမြိုး မဖွဈစခေငျြဘူး ။
ဘ၀မှာ ကိုယ့်အတွက် ဘယ်အရာက အရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် စဉ်းစားပါ ပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်ပါ ။
တစ်ခါတစ်ရံ ဘ၀က လှည့်စားတတ်တယ် ကိုယ်အလိုအပ်ဆုံးသော အရာတွေကို အနားနားရှိနေချိန်မှာ သတိမထားမိပါပဲနဲ့ ဆုံးရှုံးပြီးသွားကာမှ နောင်တတွေနဲ့ ဆက်ပြီး နာကျင်နေရတာမျိုးလေ ။
လူတွေဆိုတာလဲ ခက်တယ် ကိုယ့်ကို ချစ်လှပါချည်ရဲ့ဆိုတဲ့ လူတွေကို ဂရုမစိုက်ပါပဲ ကိုယ်မရှိလဲ ဖြစ်တဲ့လူတွေအပေါ် စေတနာတွေ ဗလဗွနဲ့ အချစ်တွေ ပုံပေးတတ်ကြတာမျိုးလေ ။
နောက်ဆုံး တန်ဖိုးမဲ့သွားခြင်းတွေ အပြင် ကိုယ့်ရဲ့ တန်ဖိုးအရှိဆုံး အရာတွေကို ဘယ်တော့မှ ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့အထိ ဆုံးရှုံးသွားရတတ်တယ် ။
ချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ အရာရာကို ပြည်ဖုံးကားချလိုက်နိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် အဲ့ဒီချစ်တဲ့ စိတ်ကြောင့် အရာရာကို မမြင်နိုင်တော့တဲ့အထိ မကန်းသွားသင့်ဘူး ။
ဘ၀မှာ လိုချင်တာတွေ ရှိသလို လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အရာတွေလဲ အများကြီးရှိတယ် ။
ကိုယ်လိုချင်တဲ့အရာတွေက ကိုယ်နဲ့ မထိုက်တန်တဲ့အခါ အချိန်မနှောင်းခင် လွတ်ချတတ်ဖို့လဲ လိုသေးတယ် ။
ကိုယ့်ကို တန်ဖိုးမထားတဲ့အရပ်မှာ တန်ဖိုးမရှိသလို ပုံစံမျိုးနဲ့ အချိန်အကြာကြီးရပ်နေဖို့ မသင့်ဘူး အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ကိုယ့်တန်ဖိုးတွေ ပိုပြီး ကျလာမှာပဲရှိတာပါ ဘာမှ ထူးလာမှာ မဟုတ်ဘူး ။
ကိုယ့်ကို လိုလိုချင်ချင်နဲ့ ကမ်းလာတဲ့ လက်တွေကိုပဲ ဆုပ်ကိုင်ပါ ဘ၀ တိုတိုလေးဆိုပေမယ့် တကယ်တမ်းလျှောက်ရတဲ့အခါ ထင်သလောက် မလွယ်ကူမှန်း နားလည်သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ် ကိုယ်ချစ်ကို ရှာပြီး ဘ၀မှာလဲ ပင်ပန်းရ ချစ်နေရတာလဲ ပင်ပန်းရရင် အဲ့ဒီဘ၀ဟာ ပိုပြီး မလွယ်ကူတတ်ဘူး ။
တစ်ဖက်သတ် . . . အတွေးတွေနဲ့ အရမ်းကြီး ခေါင်းမမာနဲ့ လိုချင်တာကို ရအောင်ယူတတ်တဲ့ အကျင့်က နေရာတကာတိုင်းမှာ ကောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူး ။
လိုချင်တာတော့ ရပါရဲ့ လိုအပ်တာတွေ အားလုံး ပေးဆပ်ပြီးမှ ရလာတဲ့ လိုချင်တာလေးက ဘ၀မှာ ဘာမှ သုံးစားလို့ မရတတ်ဘူးလေ ။
အစကတည်းက လိုချင်နေတာလား လိုအပ်နေတာလား သေချာစဉ်းစားပါ ပြီးရင် ဆုံးဖြတ်ပါတယ်
ကိုယ်တကယ်လိုအပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ အရာတွေ အနားမှာရှိနေတုန်းမှာ တန်ဖိုးထားပါ အဝေးကြီးရောက်မသွားခင် သေချာ ဖမ်းဆုပ်ထားပါ နောင်တ ဆိုတာ . . . ဘာကိုမှ ပြန်ပြီးလုပ်လို့မရတော့တဲ့ နေ့ရက်တွေမှာမှ နောက်ကျပြီးရောက်လာတတ်လာမျိုးလေ ။ လိုချင်တာတွေတော့ ရပါရဲ့ လိုအပ်တဲ့အရာတွေကို ပြန်တမ်းတပြီး နောင်တတွေ ရ နာနာကျင်ကျင်နဲ့ ဖြတ်သန်းနေရတာမျိုး မဖြစ်စေချင်ဘူး ။